Kali repository error & upgrading to Kali Linux 2018.1 - Khit Minnyo
Kali Kali repository error & upgrading to Kali Linux 2018.1
Kali repository error & upgrading to Kali Linux 2018.1
by KhitMinnyo on February 11, 2018 in Kali
အားလုံး သိကြတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ kali linux မှာ package တွေ Kernel တွေနဲ့ patch တွေ၊ Bug fix တွေအတွက် upgrade လုပ်ပေးရတာတွေ အမြဲတမ်းလိုလို ရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် apt update နဲ့ apt upgrade လို command တွေသည် Kali Linux အသုံးပြုသူတွေနဲ့ စိမ်းမနေတော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ apt update ဆိုတာမျိုး မကြာခဏ လုပ်ကြပါတယ်။ update တွေထွက်ရင် upgrade လုပ်ကြတယ်ပေါ့။ အဲသည်မှာ ပြသနာ ကြုံရတတ်တာက apt update ပြသနာပါ။
apt update လို့ ရိုက်တဲ့အခါ အထက်ပါအတိုင်း some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead. ဆိုတဲ့ Warning မျိုး
EXPKEY SIG ED444FF07D8D0BF6 ဆိုတဲ့ error မျိုးတွေ ကြုံနေရသူတွေလည်း မကြာခဏ တွေ့နေရပါတယ်။
အထက်ပုံပါ error မျိုး ရှိနေတဲ့အခါ apt update / apt upgrade / apt dist-upgrade / apt install package တွေကို သုံးလို့ မရတော့ဘဲ ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ပြသနာ ကြုံသူတွေအတွက်တော့ အောက်ပါအတိုင်း အလွယ်ဆုံး ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။
root@kali:~# wget -q -O - https://archive.kali.org/archive-key.asc | apt-key add
အထက်ပါ command ကို root user terminal ကနေ ရိုက်ထည့်လိုက်ရုံပါပဲခင်ဗျာ။ ပြီးရင်တော့ ထုံးစံအတိုင်း apt update လုပ်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
ဒီအပိုင်းမှာတော့ error မရှိသူများရော error ရှင်းပြီးသွားသူများရောအတွက်ပါ။ Kali Linux က 2018.1 ထွက်နေပါပြီ။ လက်ရှိ Kernel က 4.14.12 ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိတို့ Kernel ဘယ်လောက်လဲ သိချင်ရင် uname -a လို့ အောက်ပါအတိုင်း ရိုက်ထည့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်
Linux kali 4.14.0-kali3-amd64 #1 SMP Debian 4.14.13-1kali1 (2018-01-25) x86_64 GNU/Linux
အထက်ပါအတိုင်း ကြည့်လို့ Linux kali 4. --.-- ဆိုပြီး တွေ့ရမယ့်နေရာမှာ 4.14.12 မဟုတ်ခဲ့ရင် update မဖြစ်သေးပါဘူး။ အတိအကျပြောရရင် Kali Linux 2017.- ထဲက (သို့မဟုတ်) အဲထက် စောတဲ့ ဗားရှင်းလည်း ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ 4.14.0-kali3 လို့ တွေ့ရင်တော့ Kali Linux 2017.3 ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိက 2018.1 ပါ။ Update လေး လုပ်ကြည့်ရအောင်။ ဘယ်လို လုပ်မလဲဆိုတော့ လွယ်ပါတယ်။ အောက်ပါ command လေး ရိုက်ထည့်ရုံပါပဲခင်ဗျာ။
root@kmn:~# apt update && apt full-upgrade -y
By KhitMinnyo on February 11, 2018